Gianluigi Buffon Childhood Story plus Untold जीवनी तथ्य
घर युरोपियन स्टार गियानोलीगी बफन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
नोभेम्बर 7, 2017
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल स्ट्याकरलाई सब भन्दा राम्रो भनिन्छ उपनामद्वारा; "Gigi, सुपरमैन". हाम्रो Gianluigi Buffon बालबालिकाको कथा र जीवनी तथ्य तपाईं सम्म आफ्नो बचपन समय देखि उल्लेखनीय घटनाहरु को पूर्ण खाता ल्याउन। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनको बारे मा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र अनलाईन भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो क्षमताको बारेमा चिन्ता छ तर केवल केहि मानेका छन् LB को बफन जीवनी जो निकै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Gianluigi Buffon Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
Gianluigi "Gigi" Buffon जनवरी 28 को 1978th दिन मा जन्मे, कारारा, इटली मा मारिया स्टेला बफन (आमा) र एड्रियानो Buffon (पिता) द्वारा।
इटालियन पौराणिक अवरोध इटालियन एथलीटहरूको धनी परिवारमा जन्मिएको थियो। तिनको आमा, मारिया स्टेला एक डिस्कोस फेंक र उनको बुबा आद्राियानको प्रसिद्ध इटालियन भारोत्तोष थियो।
घरको बच्चाको रूपमा, गिगीले आफ्ना आमाबाबुसँग राम्रो सम्बन्ध राखेका थिए, विशेषगरि उनको आमा जो स्वाभाविक रूपमा आफ्नो अन्तिम बच्चाको लागि नरम स्थान थियो। तल एक बचपन बफन उनको जन्मदिन मा उनको माम द्वारा लापरवाही को एक तस्वीर हो।
लिटिल Gianluigi बफोन र आमा (आफ्नो जन्मदिन मा)
बफनले उनको उत्कृष्ट एथलेटिक जीनलाई बालबालिकाको रूपमा प्रदर्शन गरे, उनीहरूको एथलेटिक आमाबाबुको लागि धन्यवाद।
खेलकुद फोकसमा प्रारम्भिक भ्रमको बावजूद, उनी हृदयको साथ फुटबलमा गए। बस6वर्षको उमेरमा, बफनका अभिभावकले उनलाई क्यानलटोटो डे ला स्पिजिया फुटबल स्कूलमा नामाकरण गरे जहाँ उनको मिडफिल्डरको रूपमा आफ्नो क्यारियरको लागि सुरू सुरु भयो।
बफन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यारियर सारांश
सत्य भनिएको छ। गिगी एक मिडफिल्डरको रूपमा र कुनै पनि गोलकीपरको रूपमा कहिल्यै सुरू गरे। यो लागि नै हो डेभिड डी गी। बीउ एक मिडफिल्डर हुँदा युवा बफनको तस्बिर हो।
मिडफिल्डरको रूपमा जवान बफन
उनले वेनेटोको सर्वश्रेष्ठ युवा खेलाडीहरूको लागि टूर्नामेंटमा 10 वर्षको उमेरमा सान सियोमा पहिलो पहिलो खेल खेले। दुई वर्ष पछि, बफनले आफ्नो मूर्ति, क्यामरून रक्षक खोजे थॉमस एन'कोनो, जो 1990 विश्व कप मा खेले।
बफनको आइडल- थॉमस एनकोनोको स्टोरी
बामनको एक मिडफिल्डरबाट गोल्फरमा परिवर्तनको स्थिति थमस थमस थियो। इटाली को पुरा गर्न अझै पनि उसलाई डेटिन्छ।
बफनले पहिलो गोल गरेपछि दुबै टोलीले गोल गरे। केवल दुई हप्ताका प्रशंसकहरू प्रभावित भएपछि, उनी एक स्थायी स्टार्टर बने र बेपत्ता भएनन्, तर उनीहरूको टोलीमा दुई वरिष्ठ गोलकीपर्स थिए। उहाँ यस समयमा उमेर थियो 16।
पर्ममा युवा इटालियन रक्षकको सबैभन्दा ठूलो सफलता उनको चौथो सिजनमा क्लबमा आए, जब उनले कोपा इटालिया र यूईएफए कप जित्न मद्दत गरे। यो सिजन एक समय आयो जब पेरर्माको टोलीले जोआन सेबस्टियन वेरोन, ह्याना क्रेसोपो, लिलियन थुरम र फ्याब्ओ कन्नवारोको मनपर्छ। पहेंलो र नीलोको दुईवटा प्रभावशाली मौसम पछि, बफोन ज्येभियसलाई एक आश्चर्यजनक 50 मिलियन यूरो (समय मा एक रक्षक को लागि एक रेकर्ड) को लागि हस्तान्तरण गरिएको थियो।
इटालियन एथलीटहरू वर्षौंमा राम्रोसँग भुक्तानी गरिएको छ। एक माम र बुबा जो एथलेटिक्स मनाईन्छ त्यस्ता शाब्दिक समृद्ध पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँदछ। यो Gianluigi Buffon को मामला हो। यहाँ, हामी तपाईंलाई Gigi आमाबाबुमा एक अन्तरदृष्टि दिन्छौं।
फेथर: बफनका पिता, एड्रियान बफोन एउटा भिडन्त थियो। तिनी 15th सेप्टेम्बर 1945 मा लिस्साना, इटाली मा Masocco Giorgio (पिता) र Paolini टेरेसा (आमा) द्वारा जन्मेको थियो। तल एड्रिियानको एक फोटो हो।
Gianluigi Buffon को बुबा - एड्रियान Buffon
उनको एथलेटिक सेवानिवृत्ति पछि, एड्रियानो पीई स्कूल अध्यापक को रूप मा काम गरे।
मातृभाषा: गीगीको आमा, मारिया स्टेला बफन एक डिस्कस फ्यानर थियो जसले इटालीलाई राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रतिनिधित्व गर्यो। उनले आफ्नो पतिलाई सेवानिवृत्ति पछि पीई स्कूल अध्यापकको रूपमा काम गर्न सहभागी भए।
Gianluigi Buffon को आमा - स्टेला मारिया Buffon
तल गगीको एथलेटिक आमाबाबु, श्री र श्रीमती एड्रियानो बफनको आधुनिक दिन फोटो हो।
वर्तमान दिन Gianluigi बफन आमाबाबुको जस्तो देखिन्छ
ELERER SISTERS: गगी तिनको परिवारको एक मात्र पुत्र हो। गेंडाल्लिना बफन गिगी को सबै भन्दा ठूलो बहिनी हो। त्यो 1973 मा जन्मिएको थियो। तल उनको उनको र उनको बच्चा भाइ र इटालियन राष्ट्रीय नायक 'गिगी' को तस्वीर हो।
Guendalina Buffon र उनको भाइ 'गिगी'
तल बहाफ बहन, वेरोनिका बफोनको तस्वीर हो। त्यो 1975 मा जन्मिएको थियो। वेरोनिका बफनले इटालियन राष्ट्रिय भ्वाइसबल टोलीको लागि भ्यालीबल खेले।
गीगीको तुरुन्तै ठूलो बहिनी - वेरोनिका बफन
UNCLE: Gigi Buffon को डान्टे मासकोको भनिन्छ। तिनी सेरी एक्सएनमक्समा बास्केटबल खेलाडी थिए, जसले इटालियन राष्ट्रिय टोलीलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्यो।
Gigi Buffon's uncle, Dante Masocco
कोयसिन: पूर्व अन्तर मिलान र इटाली गोलकीपी पौराणिक Lorenzo Buffon Gianluigi Buffon के दादा को एक चचेरे भाई हो।
Gigi's Buffon's Cousin -Lenzo Buffon
Gianluigi Buffon Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
Gigi धनी र धेरै सुन्दर छ। यो निन्दाको अर्थले उनीहरूको जीवनभरि सम्बन्ध जटिल हुन बाध्य छ। हामी तपाईंलाई प्रस्तुत गर्दछौं, उनको सम्बन्ध जीवनको विवरण।
Gigi Buffon's love story 2005 मा फर्किन्छ जब उनी भेटिए र एलेना सेरेदेवाको साथमा प्रेमको पछाडि गए। एलेना 1998 मा मिस चेक गणराज्यको पहिलो धावक र उनको विश्व प्रतिनिधि मिस विश्व 1998 मा थियो।
Gigi Buffon र Alena Seredova
गिगीले प्रागमा जून 16, 2011 मा अलेना सेरेडेवालाई विवाह गर्यो। उनीसँग दुई छोराछोरी छन्, लुइस थमस (जन्म 2007) र डेभीड ली (जन्मे 2009)।
गिगी र तिनका बच्चाहरू, थमस (दायाँ) र डेभिड (बायाँ)
उनको पहिलो बच्चा 'थोमस' नामक गीगी बफनको मूर्ति थॉमस एन'कोनोको नाममा थियो। उनी दुवै छोराहरूसँग खेल्न समय बिताउँछन्। यो ब्रेकमा हुँदा यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
मई 2014 मा, Buffon आफ्नो पति पत्नी संग तलाक प्राप्त गर्न को घोषणा गर्यो। तिनीहरू तीन वर्षको विवाह पछि अलग भयो।
उनी चाँडै रोमांटिक रूपमा इटालियन खेलकुद पन्डित, पत्रकार र टेलिभिजन मेजर इलारिया डी एकोकोसँग जोडिएको थियो।
इटालीमा एक पत्रिका अनुसार, बफन र डी 'एकोको हो "खरगोश जस्तै" र छिमेकीहरूले आफ्नो प्रेम बनाउने शोरबारे शिकायत गर्न थाले।
2015 मा, Buffon ले भन्यो कि जो जोडी एक बच्चा को एक साथ आशा गर्दै थिए।6जनवरी 2016 मा, जोडीले त्यसोभए ट्विटरमा आफ्नो छोरा लियोपोलो मटियाको जन्मको घोषणा गरे।
2017 को गर्मी मा, जोडा संलग्न भयो। उनको सम्बन्ध र स्वेडरवो मा विवाह गर्नु भन्दा अघि, बफन पनि पहिले इटाली को राष्ट्रीय एथलेटिक्स टीम, विन्सेन्जा क्याली बाट एक स्प्रेटर लागेका थिए।
Gianluigi Buffon Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -2003 / 2004 सिजन
2013 मा, बफनले 2003-04 सीजनको समयमा अवसादको बाउन्डेसनबाट पीडित भएको बताईएको थियो, जोनलेस पेनाल्टी आउट-आउटलाई पराजित गरेपछि 2003 चैंपियंस लीग फाइनलमा हराइयो, र त्यसबेलाको ज्वेर्नसको नकारात्मक प्रदर्शनको कारण।
बफोनले नियमित रूपमा एक मनोवैज्ञानिकको भ्रमण गर्यो, तर औषधि लिन इन्कार गर्यो, र यूरो 2004 भन्दा पहिले उनको अवसादमाथि विजय हासिल गर्यो।
Gianluigi Buffon Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -वाइन व्यवसाय
जस्तै andrea Pirlo र एन्ड्रेस इनिस्टा, Buffon पनि आफ्नो आफ्नै शराब को गिलास को रूप मा तल चित्र को रूप मा देख्यो।
गीगी बफोनबाट वेस्ले सिनेइडरबाट, इवान जमोरानोको लागि: फुटबलको थप च्याम्पियन्सले आज उनीहरूको नाम रक्सीको बोटमा लेबल ल्याएका छन्।
भर्खरै 2017 मा, बफनले "बफन #1" नामको नाममा शराबको आफ्नै ब्रान्ड सुरु गर्यो।
Gianluigi Buffon Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -पोपको मित्र
बफोन विश्वासको क्याथोलिक हो। उहाँ पोप फ्रान्सिसको राम्रो मित्र हुनुहुन्छ। दुवै जोडे फुटबल र धर्म को छत को तहत 2013 मा मिले।
Gianluigi Buffon Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -प्ले र रिसेप्शनको शैली
आफ्नो युवाहरु मा एक उचित प्रतिभा को रूप मा उनको उद्भव देखि, Buffon आफ्नो क्यारियर मा आफ्नो निरंतर प्रदर्शन को लागि प्रसिद्ध छ। यो कथाले जनावरहरू, खेलाडीहरू, साथसाथै दुवै वर्तमान र पूर्व गोलाबेरी सहकर्मीहरूको प्रशंसा प्राप्त गरेको छ। यो उनको एकाग्रता र शान्त संगोष्ठी को लागी दबाव संग, साथै उनको कार्य दर र दीर्घायुको लागि हो।
उहाँ प्राय: आधुनिक गोलकपको आर्किकटाइप मानान्छ र धेरै पछि अर्को गोलकापर्सले धेरै प्रभाव र भूमिका मोडेलको रूपमा उद्धृत गरिएको छ।
Gianluigi Buffon Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -शर्ट नम्बर अंक
पर्माको क्रममा, बफनको लागि उनको 88 शर्ट को लागी संख्या 1 शर्ट पहनने को निर्णय, को लागि 2000-01 सिजन इटालीमा विवाद भएको थियो।
तथापि, बफनले संख्याको नव-नाजी अर्थहरूको बारेमा जानकारी नदिने दावी गरेको छ, भन्छन् कि 88 "चार बल" को प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन चरित्रको प्रतीक र व्यक्तिको विशेषता हुन्। उनले भने कि उनीहरूले यी युट्युबहरूको लागि यूरो 2000 भन्दा पहिलेको चोट पछि उनीहरूको "पुनरुत्थान" को प्रतिनिधित्व गर्नका लागि उनीहरूको आवश्यकता चिन्हित गर्नको लागी हुन्।
पछि तिनले नम्बरहरू परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरे, छनौट गर्नुहोस् स्क्वाड नम्बर 77।
Gianluigi Buffon Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -जोखिमको सजावट
2000 मा, हार्मोन हाई स्कूल लेखा डिप्लोमा को नकल गर्न को लागि एक पर्म विश्वविद्यालय को कानून को डिग्री दाखिला गर्न को लागि एक चार वर्ष को जेल सजा को जोखिम मा खतरा।
उहाँले 3,500 मा 2001 यूरो ठीक भुक्तानी गर्नुभयो। पछि उहाँले घटनालाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो अफसोसको रूपमा वर्णन गर्नुभयो।
Gianluigi Buffon Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -अवैध शर्त
12 मई 2006 मा, को उचाइको समयमा Calciopoli घोडा, Buffon अवैध रूपमा सेरी ए म्याचहरूमा दाखिला गर्ने आरोप लगाएको थियो, जसले शुरुमा इटालीको 2006 विश्वकप टोलीमा खटाइयो।
बफर को औपचारिक रूप देखि पूछताछ र खेल म्याचहरुमा शर्त राखन स्वीकार गरे। यो उनको कारण थियो कि फुटबल खेलाडी अक्टोबर 2005 देखि बेल्ट बाट मनाईयो। डिसेम्बर 2006 मा सबै शुल्कहरु बाट बफर को खाली गरियो।
Gianluigi Buffon Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -फुटबल राजनीति
7 मई 2012 मा, बफन को इटालियन फुटबलर्स एसोसिएशन (एआईसी) को उपाध्यक्ष चुनेको थियो। यो पहिलो पटक एक सक्रिय फुटबलरले यस पदमा राखेको थियो।
त्यही वर्ष, बफोनले सामेल गर्यो "विविधताको सम्मान" कार्यक्रम, UEFA को माध्यम ले, जो फुटबल मा नस्लवाद, भेदभाव र असहज विरुद्ध लडन को उद्देश्य थियो।
Gianluigi Buffon Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -उनको प्रोवाइसी
Gianluigi Buffon एक उज्ज्वल भविष्यको भविष्यवाणी गरिएको छ कि संयुक्त राष्ट्रसंगत गियानोलियगी डनररममको लागि जसले उनको नामलाई समान नाम दिन्छ। 'एसी मिलानो गोलकीपर डनरर्मम मेरो छोरा हुन सक्छ' - Gianluigi Buffon भन्छन्।
यो एक लोकप्रिय इन्टरनेट खोज भएको छ किनकि AC मिलान गोलकीपर बफनसँग सम्बन्धित छ।
एसी मिलान गोलकीपरको अनुसार ... "म गीगी संग एक महान रैपिड छ। उहाँले मलाई मलाई सल्लाह दिनुहुन्छ र मलाई मेरो भाइ जस्तो व्यवहार गर्दछ जस्तो कि तपाइँ हामी एउटै नाम साझा गर्दछौं र सम्बन्धित छैनौं। मसँग छ प्रयास गर्यो हरेक चाल हेर्न उहाँले प्रशिक्षणमा बनाउनुभएको छ र म उहाँलाई एक नायक हुनको निम्ति उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। सबैजना भन्छु म गीगीको वारिस, उसको छोरा वा भाइ हुँ। अब म केवल मिलान मा केन्द्रित छु र त्यहाँ राम्रो गर्दैछु, यो छ टोली मैले एक बच्चा भएकोले मैले समर्थन गरेको छु। म पहिले नै एक शीर्ष क्लबमा छु। "
हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन सही लाग्दैन, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!
इटाली फुटबल डायरी
vannyhenrico - फेब्रुअरी 23, 2020
vannyhenrico - फेब्रुअरी 23, 2020 0
जुन 15, 2018
डेविड जप्पाकोोस्टा बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बाल्यकाल तथ्य
सेप्टेम्बर 14, 2017
फेब्रुअरी 27, 2018
फेब्रुअरी 12, 2019
अगस्ट 11, 2018